China Solenoid Valve BBQ Vagadziri uye Vatengesi - Aokai
Musha > Zvigadzirwa > Solenoid Valve BBQ
Solenoid Valve BBQ Vagadziri
Solenoid Valve BBQ ndiyo chiyero chepasi rose mune solenoid mavharuvhu eAerospace, Marine uye Space application. Tine makore anopfuura 77 echiitiko uye mazana emavharuvhu ane patented, isu tine yakasarudzika sarudzo ye solenoid pamwe nehunyanzvi hwekugadzira nekugadzira mhinduro kuzadzisa zvaunoda.
Iyo yemhando yepamusoro, Solenoid Valve BBQ kunyatso uye kuvimbika kwezvigadzirwa zvedu kunovaita iwo akakosha kune mazhinji emabhizimusi anodikanwa kwazvo pasi pano. Semuenzaniso, yedu nzvimbo solenoid mavharuvhu akagadziridzwa kune akaomarara kuvhura mota kunyorera. Ndege solenoid mavharuvhu ayo atinogadzira anoratidza yakakwira mashandiro-kusvika-kuyerwa chiyero, kuverengera kuti vanounza zvakaringana mashandiro uye mashandiro sezvinobvira nepo vachipa zvishoma sezvinobvira kune yakawanda mota. Pamusoro pezvo, vagadziri vanovimba nemavharuvhu edu solenoid mavharuvhu ekudzivirira kupinda kwemvura. Hazvina mhosva kuti vanopedzisira vashandiswa sei, kugona kwedu kugadzira tsika sosinoid mavharuvhu kunoita kuti Solenoid Valve BBQ Controls ishamwari yakakosha muzvikamu zvakawanda.
Kuiswa uye kugadzirisa
Tarisa kunyorerana kwekuyerera kwekufamba nemuseve wakadhindwa paSolenoid Valve BBQ muviri, tarisa kuenderana kwakaringana kwekubatanidza mapaipi uye kubvumira nzvimbo yakakwana kubva kumadziro kubvumidza yemahara mweya kutenderera. Tinokurudzira kuisa firita kumusoro kwerimwe gadza inokwidziridzwa necoil munzvimbo yakatwasuka kana yakatwasuka.Coil inogona kutenderedzwa nemadhigirii mazana matatu mune chero nzira. Gadza munzvimbo inodzivirirwa kubva kumvura nemvura inoputika kana madonhwe. Unyanzvi hunogona kugadziriswa kubva pa 0 cubic metres / h kusvika pakureba kwakatarwa mundiro (kunze kwemhando dzendarira uye 4 "- 5" - 6 "modhi) Bvisa coil fastener chivharo, shandura yekugadzirisa sikuru pasi pekukiya dowel Ita shuwa kuti gadziriso yemagetsi inoitwa apo zvinopisa zviri kushanda, uye kana kugadzirisa kuchinge kwapera sikuruwa yekukiya dhiri. Kugadziriswa pazasi pe40% kugona hakugone kutaridzika nekuti zvinogona kukonzera kusagadzikana
Bvisa chivharo chekudzivirira uye batanidza tambo dzemagetsi kune rectifier redunhu terminal bhodhi. Kana tambo dzichifanira kupfuura nepaburi rekutanga rakavharwa. shandisa rubber capsule yakaiswa pasi pekepisi kuvhara chero imwe kuvhura. Kana iri 12V kana 24V mavharuvhu ane simba mavharuvhu maviri anopihwa akanyorwa nezviratidzo L/N uye +/- (kunze kwemamodhi eflanged nemakoiri ane jekiseni repurasitiki) Nemagetsi anochinjana batanidza kune zvinopinda L/N. Kana yakagadziridzwa kana kuti yakananga, ine zvinyorwa+/-.CHENJERERO:Dzima, ese Solenoid Valve BBQ simba usati wasevhita chero chikamu chegadziriro.
Kuchenesa uye kugadzirisa
Guruva Solenoid Valve BBQ uye chero mitumbi yekunze inogona kubviswa zviri nyore kubva kusefa kana nzvimbo yegasi yekupfuura. Mushure mekuvhara kumusoro kwerwizi gasi nemagetsi emagetsi, bvisa coil uye bvisa screws inogadzirisa iyo counter-flange kumuviri wevhavha. Munguva yekushanda uku kuchengetwa kunofanirwa kutorwa kwete kukonzera kukuvara kune chigaro dzimba uye teflon inotsvedza inosunga
Mubvunzo: Iwe uri Solenoid Valve BBQ kugadzira?
A: Hongu, isu tiri mugadziri uye mutengesi we solenoid mavharuvhu uye thermocouples ane anopfuura 16 makore ruzivo muChina.
Mubvunzo: Uchandipa mhinduro kusvika rinhi?
A: tichakubata iwe mukati meawa makumi maviri nemana nekukurumidza sezvatinogona.
Mubvunzo: Unogona kugamuchira ODM & OEM sevhisi?
A: Isu nyanzvi tinopa OEM & ODM sevhisi uye mazhinji echigadzirwa chedu anogona kugadzirwa.
Mubvunzo: Unopa emahara samples?
A: Tine urombo, hatitengesi masampuli emahara. Mushure mekuraira kwako kwakawanda, tichabvisa mari yemuenzaniso kubva kune yechipiri.
Q:Mutengo uri sei?
A: Sezvo isu tichitenda kuti mhando ndiyo inonyanya kukosha, tichapa yakanakisa mhando chigadzirwa chatinogona nemutengo unonzwisisika.
Mubvunzo: Unogona here kundipa iyo ipfupi yekutungamira nguva?
A: Tine zvinhu mustock yedu, kana uchinyatsoda, unogona kutiudza uye isu tichaedza zvatinogona kuti tigutse iwe.
Q: Ndingawana sei iyo Solenoid Valve BBQ kotesheni?
A: Tumira kubvunza kwako kwatiri nekubvunza kubva kurudyi-kurudyi kana pasi peji rino.
Mubvunzo: Ndingawana sei ma sensors angu? / Ndeipi nzira yekufambisa?
A. Isu tinotakura zvinhu zvakanyanya nekutaura: DHL, FedEx, UPS, TNT, nezvimwe kana logistics nechiratidzo.
Lpg uye Ng Magnet Valve yeGasi Mvura Heater
Yakaomarara mhando kudzora zviyero zvekuvaka uye kuyedza. Runako nyore kupinza munzvimbo. Kwete OEM asi inokodzera OEM Maitiro, mhando yacho yakaenzana nezvinodiwa neOEM. Mutambo wakakwana uye Sarudzo Yakanaka yeDirect kutsiva zvikamu zvekutanga. Flame chengetedzo vharafu inoda kubatana ne thermocouple Iyi inotevera sumo yeLpg uye Ng Magnet Valve yeGesi Mvura Heater, ndinotarisira kukubatsira iwe kuti unzwisise zviri nani.
Gasi Fireplace Magnet Valve
mutambo wakakwana uye Sarudzo Yakanaka yeDirect kutsiva kwezvikamu zvepakutanga. Chrome Flange uye Brass Muviri Hurefu Hupenyu. Shandisa ne Natural Gasi kana LPG Liquid Propane Fuel.Tinogamuchirwa kutenga Gesi Fireplace Magnet Valve kubva kwatiri. Chikumbiro chega chega kubva kune vatengi chiri kupindurwa mukati memaawa makumi maviri nemana.
Shandira zvese zvishandiso zvinehukama uye propane matangi. Yakanaka gasi grill, hita, kusvuta, musasa chitofu, tafura yepamusoro petafura, gomba remoto, turkey fryer, nezvimwe.Sezve nyanzvi Electoral Magnet vharafu kugadzira, unogona kuva nechokwadi chekutenga Electoral Magnet vharafu kubva kufekitori yedu uye isu tinokupa iwe iyo yakanakira-yekutengesa sevhisi uye inouya nenguva.
Gasi Geyser Magnetic Valve
Dhizaini Yese: Inoshandiswa zvakanyanya mumadiridziro, pombi dzepombi, oiri negasi, zvimwe zvekutengesa uye zvekugara. Izvi zvinotevera sumo ye Gas Geyser Magnetic Valve, ndinovimba kukubatsira kuti uzvinzwisise zviri nani. Tikugashirei vatengi vatsva nevakuru kuti varambe vachibatana nesu kugadzira ramangwana riri nani pamwechete!
Gasi Boiler Magnetic Valve yeOvheni
Yakaderera kureba yakasimba furemu â€“ chinopisa chimwechete chine muviri wakasimba zvakanyanya uye chakabatana zvekukwanisa kutakurika zvakanyanya. Zviri nyore kuchengeta uye kukwanisa kubata uremu hunorema, iyo inorema-basa rinopisa kune yako yekunze cookouts.Sezvo inyanzvi yekugadzira, tinoda kukupa iwe Gasi Boiler Magnetic Valve yeOvheni. Uye isu tichakupa iwe yakanakisa mushure mekutengesa sevhisi uye kuendesa panguva.
Universal Gasi Sensor Magnet Valve yeGasi Heater
Yakakwira kuburitsa - kukwirisa gasi kune yakanyanya kudzvanywa Bikira rimwe chete rinopisa, mamota, uye magrill zviri nani nekukurumidza. Kuwedzerwa kukuru kune avo vari kutsvaga simba ipapo Tailgating, musasa, kana kunyange apo neapo mhuri kusangana-up.Tinogamuchirwa kutenga Universal Gas Sensor Magnet Valve yeGasi Heater kubva kwatiri. Chese chikumbiro chevatengi chiri kupindurwa mukati meawa makumi maviri nemana.
Aokai inyanzvi Solenoid Valve BBQ vagadziri uye vatengesi muChina. Zvigadzirwa zvedu ndezve CE Certified. Mukuwedzera, isu tinopawo sampuli yemahara. Unogona kutenga zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvinogara nemutengo wakaderera kubva kufekitari yedu. Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu zvemhando, ndapota taura nesu nekukurumidza. Tarisira kushanda newe! Gamuchira shamwari kubva kumativi ese ehupenyu anouya kuzoshanya, kutungamira uye kutaurirana bhizinesi.